Malunga nathi - Hebei Shuolong Metal Products Co., Ltd.
Iminyaka engaphezu kwama-12 yamava olunzulu ukwaluka umnatha metal zokuhombisa
I-ShuoLong mesh yesinyithi ngumenzi oqinisekisiweyo we-ISO, ejolise kwimveliso, Ukuphanda kunye noPhuhliso lomgangatho ophezulu wocingo loshishini lokuhombisa. Ngokusisiseko khonza ubunjineli bobuchwephesha behlabathi kunye neenkampani zokwenza iikhontrakthi kunye namaziko oyilo loyilo.
I-Shuolong iqela lokwakha i-metal mesh linokukunceda ngokugqibeleleyo kwizakhiwo zokwakha, ukuthuka, udonga lwangaphandle, ii-canopies, indawo yokupaka iimoto, ukumiswa kwenkqubo yesilingi, ikhethini yesinyithi, iscreen sokugcoba, udonga Kunye neeprojekthi zoluntu.
Uluhlu olubanzi lweemveliso kunye neenketho zokwenza ngokwezifiso zisivumela ukuba sixhase kwinqanaba lokuqala loyilo. Oku kwenza ukuba iprojekthi ifumane ukusebenza kunye nokuhle.
Kutheni Khetha Metal enemingxuma?
Umnatha wentsimbi yi-100% yezinto ezinokuphinda zisetyenziswe zingena nomoya, ukusebenza kakuhle kokukhusela, kwaye kulula ukwenza imodeli yobugcisa, ukufakelwa okulula, iindleko eziphantsi eziphantsi, kunye nokugcinwa ngokulula, kwaye inezinga eliphezulu lokukhusela umlilo ngezinto zokwakha umhombiso, Ezi zinto ziluncedo zenza usetyenziso yesinyithi ukuba isetyenziswe kwiindawo ezininzi nangakumbi zoluntu, ukuba lukhetho lokuqala lwezixhobo ezilungele indalo.
Sinako sifake kwizinga eliphezulu, iminatha yokwakha eyodwa ukuhlangabezana ngokugqibeleleyo iimfuno zakho projekthi.
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane neziko lethu lenkonzo yabathengi
Ukuqonda iimfuno zakho zokuthenga.